Ma u imaanaysaa booqasho ilkeed?
Booqashadaada ilkaha - ilaalinta qof walba nabadgelyadiisa!
Sida loo cadayo ilkahaaga
Si fiican u xoqo
La kulan difaacayaasha!
Cunista ilko caafimaad qaba oo caafimaad qaba
Ma waxaad raadineysaa xiiso badan?
Waa lagaa casuumay!
Guriga Furan ee OHP
Juun 22, 2-5 pm, 1245 Main St. Green Bay
Nagala soo qaybgal dhacdooyinka bannaanka ee inta badan leh jalaatada bilaashka ah inta aan soo bandhigeyno gawaarideena iyo goobta rugta caafimaad ee ugu cusub!